How To Archives - Akhayar Media - Myanmar Lifestyle, Tech Review, Food Review
How To	What's New	What's Rising	What's Hot	What's New
အခုက မိုးရာသီလည်းရောက်နေတယ်ဆိုတော့ မိုးတွင်းမှာဖုန်းရေစိုတာတွေ မကြာမကြာဖြစ်တတ်ကြတယ်မို့လား။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖုန်းရေမြောင်းထဲပြုတ်ကြတာတို့၊ ဗွက်ထဲပြုတ်ကြတာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုများဖြစ်ခဲ့ရင် “ဖုန်းထဲရေ၀င်တဲ့အခါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ” ဆိုတာကို အခရာ ကဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖုန်းထဲရေ၀င်တဲ့ ဖုန်းပိုင်ရှင်တွေအတွက်အသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ဖုန်းကိုရေစိုတာ ဒါမှမဟုတ် ဗွက်အိုင်ထဲ ၊ ရေမြောင်းထဲ ပြုတ်ကျတာတို့ဖြစ်တဲ့အခါ ဖုန်း Power ကို Off လုပ်လိုက်ပါ။ တစ်ချို့ ဖုန်းတွေက ဖုန်းထဲရေအများကြီးဝင်သွားရင်သူ့ဘာသာ ပါဝါ ပိတ်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရေအိုင်ထဲ ပြုတ်ကျတာတောင် ပါဝါ မပိတ်ဘူးဆိုပြီး မပေါ့ပါနဲ့။ အဲ့လိုဖြစ်ရင် အရင်းဆုံးဖုန်းကို ပါဝါပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ဖုန်းကို တစ်သျှူး နဲ့သုတ်ပြီးခြောက်သွေ့တဲ့နေရာမှာထားပါ။ ဖုန်းထဲရေ၀င်တဲ့အခါမှာ မလုပ်သင့်တဲ့အချက်တွေကတော့ – ဖုန်းကို ပါဝါ မဖွင့်ထားပါနဲ့။ […]
Window 10 မှာ Boot တက်တာနှေးခဲ့ရင်ဒီလိုပြင်ပါ
Articles How To Tech
Window 10 အသုံးပြုတဲ့သူတိုင်းအတွက် စက်ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်တဲ့ အခါ Boot လုပ်တာနှေးတယ်ဆိုရင်တော့ မြန်ဆန်စေမယ့် နည်းလမ်းကို အခရာမှ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။Startup မှာ Programs တွေကို ရပ်ထားပါ။ ကွန်ပျူတာမှာ Software အသစ်တခုခုကို Install လုပ်လိုက်တာနဲ့ ကွန်ပျူတာရဲ့ Startup မှာ အလိုလို ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ App တွေကတော့ ကွန်ပျူတာဖွင့်လိုက်တာနက် အလိုအလျောက်ပေါ်တာ အဆင်ပြေစေပါတယ်။ ဥပမာ – Antivirus Software တို့လိုမျိုးပေါ့။ Software တွေများများသွင်းလေလေ စက်ပြန်ဖွင့်တဲ့ အခါပိုကြာလေလေ ဖြစ်စေပါတယ်။ ကွန်ပျူတာစဖွင့်တာနဲ့ ဘယ်Programs တွေ ကိုယ့်စက်မှာ Run နေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ CTRL+ALT+DEL ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ […]
USB တစ်ချောင်းမှာ RAW File Error တက်ခဲ့ရင်
Articles How To Tech Uncategorized
သင့်ရဲ့ USB Drive ဟာ ကွန်ပျူတာမှာ အသုံးပြုတိုင်း File တွေဖွင့်မရပဲ Format ချခိုင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုပြန်ဖြေရှင်း ရမလည်း ဆိုတာနဲ့ Drive ထဲက Data တွေ Backup လုပ်နည်းကို အခရာမှ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ USB Drive မှာ အသုံးပြုကြတဲ့ File System တွေဟာ NTFS ၊ FAT 32 ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ System တွေမဟုတ်ပဲ RAW System လို့ Computer မှာ မြင်နေရတယ်ဆိုရင် တော့Format ချမှသာ အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Format မချခင် တော့ Data […]
Hard Disk ကိုသန့်ရှင်းမယ့် နည်း လမ်းအသွယ်သွယ်
Computer Hard Drives တွေရဲ့ မှတ်ဥာဏ်သိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ ပမာဏ တွေက နည်းပညာ တစ်နေ့ တစ်ခြားတိုးတက်လာတာ နဲ့အမျှ ပိုများလာတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ File အများကြီးမရှိလည်း Hard Disk မှာ Space သိပ်မကျန်တာကို မြင်ရမှာပါ။ အဲ့ဒီတော့ ကွန်ပျူတာ Hardisk မှာ အချက်အလက်တွေ သိမ်းဆည်းဖို့ မလုံလောက်တော့ဘူးဆိုရင် မပူပါနဲ့ အခု ဖော်ပြတဲ့ အချက်တွေအတိုင်းလုပ်ကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ မလိုတဲ့ဖိုင်တွေရှာပြီး ဖျက်ရတာကို အလုပ်ရှုပ် အချိန်ကုန်တယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် တော့ CleanMyPC Tool ကိုအသုံးပြုပြီး ကွန်ပျူတာမှာမလိုတဲ့ဖိုင်တွေကို ရှင်းထုတ်နိုင်ပါတယ်။ CleanMyPC Tool မှာ App […]
(Zawgyi) ကဲ Akhayar ပရိတ်သတ်ကြီးတွေထဲမှာ အများစုကြုံတွေ့ရတဲ့ Xiaomi ဖုန်းတွေရဲ့ Google play store error အဆင်ပြေအောင် ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့နည်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။မဖြေရှင်းခင်ဘာလို့ Google play servie error တက်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကလဲ မေးချင်စရာပါ။ အဓိက Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ ရှိတဲ့ Rom (သို့မဟုတ်) Firmware ကြောင့်လို့ ပဲပြောရမှာပါ။အများအားဖြင့် Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ Rom နှစ်မျိုးနဲ့ လာလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ Rom တွေက တော့ China Rom နဲ့ Global Rom တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့နှစ်ခုရဲ့ ခွဲခြားပုံလေးကလဲ အရမ်းကိုလွယ်ကူပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ဖုန်းကို power စဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ […]
How To Joker Tech
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဖုန်းတစ်လုံး လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလလောက်တုန်းက ပျောက်သွားခဲ့ဖူးပါတယ်။ YBS ကားစပေါ်ခါစ ခါးပိုက်နှိုက်တွေ အရမ်းသောင်းကျန်းနေချိန်မှာ ဈေးဦးအဖောက်ခံလိုက်ရတာပါ။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဖုန်းဒါမှမဟုတ်၊ တက်ဘလက်၊ လက်ပ်တော့ စတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပျောက်ရှသွားတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ကလည်း ဖုန်း Patten Lock / Screen Lock ဘာမှမခံထားဘူးဆိုရင် အထဲက အထူးသဖြင့် Personal Data တွေပါဝင်နေတဲ့ Facebook နဲ့ Messenger စတဲ့ တွေဟာ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က ဖုန်းပျောက်သွားတဲ့အခါ ဖုန်းထဲက Facebook နဲ့ Messenger ကို Logout လှမ်းလုပ်တဲ့ နည်းလမ်းကို ပြသပေးမှာပါ။ လွယ်လွယ်လေးပဲမို့လို့ စမ်းသပ်ပြီး […]
ကင်မရာပါတဲ့ ဒရုန်းသေးသေးလေး လိုချင်လား
နည်းပညာအသစ်အဆန်း ကြိုက်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် အသစ်ထပ်ပေါ်လာတာကတော့လက်ရှိမှာထွက်ပေါ်လာတာကတော့ ကမ္ဘာ့အသေးဆုံး မောင်းသူမဲ့ Drone ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Cheerson Company ဟာ ကမ္ဘာ့အသေးငယ်ဆုံး ကင်မရာပါဝင်တဲ့ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ငယ် CX-10C ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး စတင်ထုတ်လုပ်ကြောင်းကြေငြာတဲ့အချိန်မှာ Cheerson CX-10C ရဲ့ဈေးနှုန်းဟာ ဒေါ်လာ၅၀ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအခါမှာတော့ နေရာတော်တော်များများမှာ ၂၅ဒ်ါလာ နဲ့သာရောင်းချလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ CX-10C မှာ Camera Memory 2GB ပါဝင်တာကြောင့် ရိုက်ပြီးသားပုံတွေ လုံလုံလောက်လောက် သိမ်းဆည်းထားနိုင်မှာပါ။ CX-10C နဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ပုံရိပ်တွေရစေမယ့်အပြင် ညဘက် အသုံးပြုဖို့အတွက်အဆင်ပြေအောင် LED မီးတွေထည့်ပေးထားပါတယ်။ Drone ကိုမောင်းနှင်နေတဲ့အချိန် လေထဲမှာ ပျံသန်းနေတဲ့ မယိမ်းမယိုင် […]
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook အသုံးပြုသူဟာ ၁၄သန်းအထိ ရှိလာပြီလို့ Hootsuite ရဲ့အစီရင်ခံစာအရ သိရပါတယ်။ တချို့တွေက သတင်းဖတ်ဖို့၊ သူငယ်ချင်တွေနဲ့ စကားပြောဖို့၊ ဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့ စသဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံနဲ့ အသုံးပြုကြတယ်လေ။ လူတန်းစားမျိုးစုံ သုံးနေတာဖြစ်လို့ ကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သုံးတဲ့လူတွေရှိသလို မကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သုံးတဲ့လူလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Facebook Account ဟာ Hack ခံမယ့်ဘေးမှ ကင်းဝေးအောင်လို့ လုပ်ဆောင်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁။ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ Password ကို အသုံးပြုပါ။ Facebook မှာ Password ထားတဲ့အခါမှာ အလုံးရေများလေ ကောင်းလေပဲ။ Password မှာ ABC တို့လို Capital Letter တွေ၊ abc […]
Galaxy S8 မှာ အမြင့်ဆုံး Resolution ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
အသစ်ထွက်ရှိတဲ့ Samsung Galaxy S8 ဒါမှမဟုတ် Galaxy S8 Plus ကို ၂၀၁၃ နောက်ပိုင်းမှာ ထွက်ခဲ့တဲ့ Screen Resolution ပုံစံလိုထင်ပြီး ဝေခွဲမရဖြစ်နေပါသလား။ အသစ်ထွက်တဲ့ Samsung ဖုန်းတွေမှာ အရင်လို QHD + (2960 x1440) မဟုတ်တော့ပဲ Default Resolution FHD + ( 2220 x 1080) ပါရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Resolution ကိုအရင်နဲ့မတူပဲ ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ အကြောင်းအရင်းကို အတိအကျမပြောကြားပေမယ့် Battery သက်တမ်း နဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို မြှင့်တင်ဖို့ အတွက်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းများအရသိရပါတယ်။ S8 နဲ့ S8 Plus […]
ကိုယ့် Facebook အကောင့် အဟက်ခံရတဲ့အခါ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ??
ကျွန်တော်တို့ နေ့တိုင်းအသုံးပြုနေရတဲ့ Facebook အကောင့်သာ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ခိုးယူခြင်းကို ခံလိုက်ရတဲ့အခါ တော်တော်များများက ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အကယ်လို့များ သင်အမြတ်တနိုးထားရတဲ့ Facebook အကောင့် အဟက်ခံရတဲ့အခါ အချိန်မီပြန်ယူနိုင်ပြီး ၊ ကိုယ့်အကောင့်လုံခြုံရေးကို တော်ရုံလူတွေဟက်မရအောင် ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ထားနိုင်မယ့် Tips နဲ့ Tricks တွေကို အခရာပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ ကိုယ့်အကောင့်ကို သူများဟက်သွားကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ သင့်အနေနဲ့ သင့် Facebook အကောင့်ထဲမှာ မူမမှန်တဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ တွေ့လာရတဲ့အခါ ၊ သင့်အနေနဲ့ Facebook ရဲ့ Setting ထဲကို သွားပြီး ဘယ်သူ ကိုယ့်အကောင့်ထဲဝင်နေတယ်ဆိုတာကို သွားကြည့်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ့် Facebook ထဲက […]
ဖုန်းရေစိုခဲ့ရင် ဒီလိုလေးတွေလုပ်ပေးပါ	Jan
ကိုယ့် Facebook အကောင့် အဟက်ခံရတဲ့အခါ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ??	Joker
ပျောက်သွားတဲ့ ဖုန်းထဲက Facebook နဲ့ Messenger ကို Logout လှမ်းလုပ်နည်း	Joker
Facebook Account တွေ ဘေးကင်းစေဖို့ ကာကွယ်ထားလိုက်ပါ	Kyaw Soe Aung
Android ဖုန်းတစ်လုံးမှာ မှားယွင်းဖျက်မိတဲ့ ဒေတာတွေကို ဘယ်လိုပြန်ယူမလဲ	Min Thu Kha
မည်သူမဆို ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲက ဓါတ်ပုံတွေ၊ဗွီဒီယိုတွေကိုမှားပြီးဖျက်မိတာမျိုးတွေ ရှိခဲ့ဖူးမှာပါ။ အဲ့ဒီလို မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင် အခုပြောတဲ့နည်းလေးနဲ့ မှားဖျက်မိတဲ့ဓါတ်ပုံတွေ၊ဗွီဒီယိုတွေအပြင် Messages နဲ့ Contacts တွေကို ပါ အလွယ်တကူပြန်ယူလို့ပါတယ်။ အဆင့်(၁)- ဒေတာမှားဖျက်မိသွားပြီဆိုတာနဲ့ သင်ရဲ့ Android ဖုန်းကို Update မလုပ်ပါတော့နဲ့။ အဆင့်(၂)- Android Data Recovery ပရိုဂရမ်ကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲ၍ ကွန်ပြူတာတွင်ဖွင့်ပါ။ USB ကြိုးမှတစ်ဆင့် Android ဖုန်းကို ကွန်ပြူတာသို့ချိတ်ဆက်ခိုင်းပါလိမ့်မည်။ ချိတ်လိုက်ပါ။ အဆင့်(၃)- Android ဖုန်းတွင် USB Debugging ကိုဖွင့်ပါ။ ဒါကတော့ Android Version ကိုလိုက်ပြီးတော့ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုရှိပါတယ်။ Android 4.2 နဲ့အထက်ဆိုရင်တော့ Settings>About […]
သင့်ရဲ့ Online Account တွေကို ဘယ်လို လုံခြုံအောင် ထားမလဲ	akhayaradmin
ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ၃ ပုံ ၂ ပုံလောက်ဟာ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ အသုံးပြုနေသလို လူတစ်ယောက်ဟာ ပျမ်းမျှတစ်နေ့ကို ၄ နာရီလောက် အင်တာနက် အသုံးပြုဖြစ်နေတယ်လို့လည်း စစ်တမ်းတွေက ဆိုကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်း မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ တိုးတက်လာမှုတွေကြောင့် မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူ အရေအတွက် အလျှင်အမြန်တိုးတက်လာနေသလို အင်တာနက်နဲ့ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုမှုနှုန်းကလည်း ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်ပါတိုးတက်လာနေပါတယ်။ ဒီလို အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေ၊ Mobile Banking စနစ်တွေနဲ့ လူမှုကွန်ယက် Account တွေ အားလုံးဟာ လုံခြုံရေးအတွက် Password စနစ် တစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြုထားလေ့ရှိပါတယ်။ Password တွေဟာ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်၊ အကြွေးဝယ်ကတ် အချက်အလက်နဲ့ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်တွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ […]